Sein Lyan - စိ န် လျှံ: အမှတ်တရ
Writer Sein Lyan Time 2:11 am
အဟား အစီအစဉ် တင်ဆက်သူလေးက ဘူလေးလဲ ဘူလေးလဲ ပြောပါ... ပျော်ရွှင်စရာ သင်္ကြန်ပွဲတော်ပါ
မြန်မြန်လုပ်နော်.. ဒုတိယပိုင်းဖတိကြည့်တယ်.. ဇါတ်ပုံတွေပါတင်ပေး.. ဘယ်အချိန်ကြည်ကြည့် အကိုက လှပီးသား
11 May 2009 at 04:19
အင်း ကိုနေညို့ ဘလော့မှာ ဓာတ်ပုံတော့ ကြည့်ခဲ့ပြီးသား .... ကိုးနက်ရှင်က သိပ်မကောင်းလို့ ဗွီဒီယိုကို ဒေါင်းလုပ်ချကြည့်ရတယ် .. နောက်တစ်ပိုင်းလည်း လာထား .. ဒန့်တာလေးမှ လိုချင်တယ် :D
ဟဟ ငါ့မောင်လေးက အသံကောင်းတယ်ဝေးးးးးးး ဒုတိယပိုင်း ဒန့်တာလေးကြည့်ချင်တယ် မြန်မြန်တင်ပါနော့်။ အကြွေးတွေ များနေတယ်။ ဇတ်သိမ်းတွေ၊ ဒုတိယပိုင်းတွေနော့်။
ဟီဟီ.. ကြည့်ပဲ ကြည့်ရသေးတယ်။ အသံမကြားရဘူး။ ရုံးရောက်နေတာ။ အိမ်ရောက်မှ တ၀ကြီး ပြန်ကြည့်မယ်။ ကျေးဇူးပါ ကိုဖိုးစိန်ရေ.....။ နောက်နှစ် ဒီထက် ပိုကဲ ကြမယ်ဗျာ။
လူကြီးတွေ ပြောချင်ဘူး အဟတ်
ချစ်ယောက်ဖ ချစ်ကိုကြီးရေ မြန်မြန်လေး နော်သိလား
ဖိုးစိန်တခြား ပုဆိုးတခြားလားလို့.. ဟတ်ဟတ်.
ဖိုးစိန်က ဘောင်းဘီနဲ့ပိုလိုက်တယ်ပြောမလို့ပါ.း)
11 May 2009 at 09:14
ဖိုးစိန်က မင်းသားဟေ့။ အပျိုချောတွေလည်း ချစ်စရာလေးတွေ။ ပထမဆုံးသင်္ကြန်သရုပ်ဖော်လေးကိုလည်း ကြိုက်တယ်။
လာကြည့်သွားတယ် စိန်ရေ၊ ပျော်စရာကြီး
Your voice is cool and u r smart (ahummmm).
I'm wanna see the part II as well.
ဇာတ်မင်းသားလေး ဖိုးစိန် ဖိုးစိန် .. ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ ပါစေလေ ။ နောက်နှစ်ဆိုရင်တော့ ခြေသည်းအညှပ်ခံရတဲ့ နေရာမှာ ဝင်ထိုင်ပေရော့ နော ..
အဟက် ..နာ့မောင်လေး.. ဂျစ်လို့ စတာနော့..
အို..ဘာတဲ့ တုန်း . ဖေ့သားကြီးရေ .. နောက်တဗိုက် ..အဲ .. နောက်တပုဒ်..
အဲ့ဒါ ဖိုးစိန် အသံလား ဝါး ထင်တောင်မထင်ဘူး။ အောင်ရင်ဆိုတယ်လို့ မှတ်နေတာ။ ကောင်းတယ် သယ်ရင်းရေ (အသံ)
ပျော်စရာကြီး... ကို ဖိုးစိန်ပုံ မတွေ့ ဘူးးးးး
ဟိ.. ပျော်ဂျာဂျီး.. တားတားလည်းပက်ချင်တယ် ရေ.. ပျော်ခဲ့တယ်ပေါ့ယေ.. နာလိုဘူး.. တားတားမှာတော့ ပျင်းယို့တေတော့မယ်..း(
ကြိုပြီးခေါ်ရင်လာဖြစ်မယ်ထင်တယ် အကိုလည်း ၀ါသနာပါတယ် mayD တင်တဲ့ သံချက်မှာတချို့ အပိုင်းစလေးတွေ ကအကိုရေးတာလေ သီချင်းဆိုတာလဲဝါသနာပါတယ် ကြုံတဲ့ အခါဆိုပြမယ် အဓိကပြောချင်တာကတော့ မင်းလေးရဲ့ တင်ဆက်မှုပါသိပ်ကောင်းတယ်ကွာဒီလောက်အချိန်လေးအတွင်းမှာဒီလိုတင်ဆက်နိုင်ဘို့ မလွယ်ဘူးလေကိုတိုင်လုပ်ဘူးလို့ ပြောတာ အားပေးပါတယ်ဆက်လုပ်ရဲဘော်
ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ ပါစေ စိန် ..........
အဆိုတော်လုပ်စားရင် ပေါက်လောက်တယ် နော် (ခေါင်းကိုခဲနဲ့ ထုလို့ )
စလုံး မှာတွေ့ မှကျွေးလဲရတယ်
ဟယ်... ကောင်လေးက ထင်တောင်မထင်ရဘူး..ကြည့်စမ်း... လုပ်စားလို့ရပြိ..... ဘတ်ဘတ် ၀ါးတန်းဆီမှာ ပါမစ် တင်လိုက်တော့.. ဟားဟား
အူးအူးဖွတ်ချိန်က ဆိုတာ တောင် ဒီလောက်ကောင်းတာ.... မဆိုဘဲ နေရင် ပိုတောင်ကောင်းဦးမှာသိလား.. ခစ်ခစ်....